Kitra: nodimandry i Debon, tale teknika nasionaly (DTN) - ewa.mg
Kitra: nodimandry i Debon, tale teknika nasionaly (DTN)
News - Kitra: nodimandry i Debon, tale teknika nasionaly (DTN)
Lalovan-draho-mainty ny tontolon’ny
baolina kitra malagasy. Nodimandry, omaly alakamisy teo amin’ny
faha-71 taony, i Debon Jean François, tale teknika nasionaly (DTN),
eo anivon’ny Federasiona malagasy ny baolina kitra (FMF) sady
solontenan’ny teknisianina eo anivon’ny Federasiona
iraisam-pirenena (Fifa), eto Madagasikara. Ny aretina nahazo azy
am-bolana vitsivitsy no nitarika ny fahafatesany. Olona tena niaina
tao anatin’ny baolina kitra Itompokolahy. Vao teo amin’ny faha-15
taony izy, efa voafantina tao anaty ekipa voafantin’Antsiranana;
avy eo, nilalao tao amin’ny ekipan’ny US Fonctionnaire et
Employé-n’io faritra avaratra io ka nitazonany ny toeran’ny
lohalaharana. Taorian’izay, nanatevina ny ekipan’ny MMM Toamasina,
nandrombaka ny tompondakan’i Madagasikara ny taona 1970. Nandresy
an’i Lesotho sy i Ghana teo amin’ny fifaninanana afrikanina.
Nanohy ny fianarany teto
Antananarivo ary nilalao tao amin’ny UAS Cheminots avy eo tao
amin’ny AC Sotema ka niarahany tamin-dry Ferdinand sy i Kiki ary i
Alban sy i Lanziz sy ny hafa.
Nitondra ny ekipan’ny St Pierroise
La Réunion ary efa nanazatra ny Barea U17 niatrika ny CJOI ka
nahazo ny medaly volamena ny taona 2001 sy ny 2003. Namela manano
tena sy kamboty efatra mianadahy Itompokolahy. Alevina amin’ity
zoma ity ny nofomangatsiakany. Mirary fampiononana feno ho an’ny
fianakaviany sy ny baolina kitra ny Gazety Taratra.
L’article Kitra: nodimandry i Debon, tale teknika nasionaly (DTN) a été récupéré chez Newsmada.
Minisiteran’ny Rano sy ny Instat: havaozina ny antontanisa mikasika ny rano…
Tontosa, omaly tetsy Ambohijatovo, ny sonia fifanaraham-piaraha-misa eo amin’ny minisiteran’ny Rano sy ny fahadiovana ary ny fidiovana niaraka amin’ny Instat. Tanjon’ny fiaraha-miasa ny hanavao ny antontanisa mahakasika ny tontolon’ny rano sy ny fidiovana ary ny fahadiovana eto Madagasikara.Mahasahana sehatra maro ny fanavaozana izany antontanisa izany. Voakasiky ny fanisana ny tahan’ny fahazoan’ny vahoaka malagasy rano madio fisotro, ny fomba fahazoan’ny tokantrano tsirairay rano ampiasaina ao an-trano, ny fampiasana lavapiringa madio sy ara-pahasalamana, ny fahavitrihana amin’ny fanasana tanana amin’ny rano sy ny savony…Efa misy ny antontanisa, saingy tsy mbola mivoaka amin’ny fomba ofisialy izany, raha ny fanazavan’ny tale jeneralin’ny Instat.Andrasana, araka izany, ny hanana antontanisa marina ahafahana manana ny mari-drefy enti-mamantatra ny ezaka vita sy manamafy ny ezaka tokony hohamafisina.“Mizotra amin’ny fanatrarana ny tanjona napetraky ny filoha Rajoelina Andry, ao anatin’ny vinan’ny fisandratana, ny tokony hananana mari-drefy marim-pototra ny minisitera amin’ny alalan’ity fiaraha-miasa ity”, hoy ny minisitra Rakotovelomanantsoa Voahary.Raha ny tanjona napetraka ho amin’ny taona 2023, tokony avokoa hisitraka rano madio fisotro ny 60%-n’ny mponina eto Madagasikara. Amin’ny alalan’ny fahafantarana indrindra ny antontanisa miainga eny ifotony hataon’ny Instat ny ahafantarana sy mandrefy izany aoriana.Marihina fa mifototra amin’ny hafatra lehibe efatra no voizin’ny minisiteran’ny Rano: ny fitazomana ny fahadiovan’ny rano manomboka eny am-pantsakana hatramin’ny fampiasana azy, ny fampiasan’ny tokantrano lavapiringa madio, ny fanasana tanana amin’ny savony ary koa ny fahadiovana mandritra ny fadimbolana.Tatiana AL’article Minisiteran’ny Rano sy ny Instat: havaozina ny antontanisa mikasika ny rano… a été récupéré chez Newsmada.
Tantsaha manerana ny faritra: miankina betsaka amin’ny herin-tsandry ny fambolena
Mbola maivana dia maivana ny fampiasana fitaovana mekanika ho an’ny fambolena eto Madagasikara. Taorian’ny niverenan’ny fahaleovantena, ny taona 1987, nanaovana antso avo ny hitodihana amin’izany manokana, saingy tsy misy fiovana hatramin’izao.Raha jerena, ohatra, ny fambolem-bary foto-tsakafon’ny Malagasy, mitazona 60 % amina velaran-tany volena, mbola fitaovana enti-tanana na fitaovana madinika ny fampiasan’ny maro. Na angadin’omby aza, tsy misy afa-tsy 33% manerana ny Nosy, izay mbola tsy mitovy ny fampiasana izany isaky ny faritra. Ny fampiasana fitaovana vaventy na milina vaventy, toy ny trakitera tsy mahatratra 1 % hatramin’izao.Fitaovana madinika ihany no miasa, angady sy ny namany, 97,3 %. Araka izany, mbola miankina betsaka amin’ny herin-tsandry ny fambolena eto Madagasikara, na any amin’ireo lazaina fa sompitry ny fambolem-bary (Alaotra, Marovoay, Mangoky). Vitsy ny eny am-pelatanan’ny tantsaha hatramin’ireo fitaovana famonoana bibikely, porofo mahabetsaka ny vokatra simba. Na amin’ny fotoana fiakaran’ny vokatra, mbola herin-tsandry ihany no miasa amin’ny ampahany be indrindra. Ny fikapohana akotry sy fitotoam-bary no azo lazaina misy, 80 % sy 60 %. Mahavita 50 kg hatramin’ny 3 t isan’ora, raha ny vary ihany, ireny toerana ahitana fitaovana ireny.Betsaka ny tsy tanteraka ny anjaran’ny fanjakanaMisy ihany ireo fampisehoana isan-taona, toy ny tsenabe isan-karazany (FierMada, tsenabe isam-paritra …), teo ny tetikasa samihafa, ohatra, ny Papriz (Projet d’amélioration de la productivité rizicole), ny SRI (Système de riziculture intensive) ireo rehetra ireo, ilàna karazana fitaovana ho an’ny fambolem-bary ary manentana ny mpamboly hampiasa izany. Saingy, tsy zakan’ny fahefa-mividin’ny tantsaha ireny fitaovana ireny, indrindra amin’izao vanin’andro izao. Eo ireo atrikasa isan-karazany eto an-toerana sy aty amin’ny tapany atsimon’i Afrika. Manampy betsaka ny Japoney amin’ny alalan’ny Ticad* sy Jica*. Tanjona amin’ireny ny hampitomboana ny voka-bary 6 t /ha, raha 2,3 t /ha ny salanisa, nefa tsy mety tratra izany eto Madagasikara. Betsaka ny anjara andraikitry ny fanjakana tsy tanteraka. R.MathieuTicad : Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’AfriqueJica : Agence japonaise de coopération internationale L’article Tantsaha manerana ny faritra: miankina betsaka amin’ny herin-tsandry ny fambolena a été récupéré chez Newsmada.
Fampindramam-bolan’ny Cnaps: manaiky ny sendika, haverina tsikelikely ny vola
Naneho hevitra, omaly, ny sendikàn’ny mpiasa maromaro, ny CSTM, ny Sekrima, ny Tolon’ny Mpiasa, ny CSTM, mikasika ilay fampindramam-bola kasaina hataon’ny Cnaps ho an’ny mpiasan’ny tsy miankina. Nilaza Rakotondrazafy Jean de Dieu, avy amin’ny CSTM, fa tsy mitovy hevitra amin’ilay sendikà iray nangataka ny vola, nefa tsy averina, izy ireo satria hisy fiantraikany mafy ho an’ny Cnaps izany. Mety hiantraika any amin’ny fisotroan-dronono, ny vola ho an’ny bevohoka, sy ny fanampiana vola omen’ny Cnaps ny mpikambana izany.Ho an’ny CSTM, fampindramam-bola ny ataon’ny Cnaps ka haverina tsikelikely avy eo.Angatahin’ireto sendikà koa ny ampihenana ny tahan’ny zanabola mba ho 5% ka ny fanjakana no mameno ny ambiny ho an’ny Cnaps. Antony, tena sahirana ny mpiasa malagasy amin’izao krizy Covid-19 izao ka mety ho afaka enim-bolana na fito volana any vao mety ho tafarina.Misy ny ahiahy ka tokony hisy ny antokaNilaza ny sekretera jeneralin’ny Sekrima, i Boutoudi Rémi, fa maro ny mpiasa very asa, na zara raha miasa amin’ny ampahany, ao koa ny tsy nahaloa hofan-trano. Tokony hisy ny diniky fiarahamonina, handinihana manokana izany amin’izao fotoan-tsarotra izao. Angatahiny koa ny hampiakarana ny sandan’ny vola indramina ary halavaina ny fe-potoana hanonerana azy. Manamafy izany ny sendika Tolon’ny mpiasa (TM), tokony mba hampiakarina ny sandan’ny vola fa tsy ampy ilay 200 000 Ar.Nametraka ny ahiahiny ireto sendikà ireto,mikasika ny fanonerana ny vola ka ho very an-javony. Nilaza i Tsimanirimanana Henri Richard, mpikambana ao amin’ny CSTM, fa tokony hisy fifanarahana mazava sy antoka mba hiverenan’ny vola indramina. Mahafantatra ny mpiasa ao aminy ny orinasa tsirairay ka tsy tokony hisy ny hosoka.Njaka A.L’article Fampindramam-bolan’ny Cnaps: manaiky ny sendika, haverina tsikelikely ny vola a été récupéré chez Newsmada.
Fitantanana andrimpanjakana: misokatra ny hazakazaka ho etsy Ambohidahy
Tsy ho ela ny fisokafan’ny hazakazaka ho an’ireo hifaninana ho etsy Ambohidahy. Hiaraka hisokatra amin’ny fotoam-pivorian’ny Antenimierandoholona etsy Anosikely, rahampitso 17 marsa, ny fametrahana ny antontan-taratasy firotsahan-kofidina ho an’ireo olona roa, hatolotra ho mpikamban’ny HCC. Nambaran’ny eo anivon’ny lapa maitso Anosikely fa tsy voatery ho mpikambana eo anivon’ity andrimpanjakana ity akory ny mpirotsaka hofidina amin’izany.Tsy mbola namaritra ny daty hisokafan’ny fametrahana ny antontan-taratasy tahaka izany kosa ny eo anivon’ny Antenimierampirenena. Manana solontena roa koa izy ireo, araka ny voalazan’ny lalàna, hatolotra ho mpikambana eo anivon’ny HCC.Solontena telo tendren’ny filohan’ny RepoblikaHanampy izany koa ny eo anivon’ny Filankevitra ambonin’ny mpitsara (CSM). Manana anjara mpitsara roa ho amin’izany toerana izany izy ireo ary efa namoaka fanambarana fisokafan’ny firotsahan-kofidina amin’ny alalan’ny fampahafantarana ireo antontan-taratasy ilaina amin’izany.Ankoatra ireo, manana olona telo, tendreny ho mpikamban’ny HCC, ny filoham-pirenena ka mahafeno ho sivy ireo handrafitra izany andrimpanjakana etsy Ambohidahy izany.Raha tsy misy ny fiovana, tokony ho fantatra mialoha ny faran’ny volana marsa izao ireo mpikambana rehetra eo anivon’ny HCC.Synèse R.L’article Fitantanana andrimpanjakana: misokatra ny hazakazaka ho etsy Ambohidahy a été récupéré chez Newsmada.
Covid-19: Situation du 13.08.2020
Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « Covid-19: Situation du 13.08.2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.Selon les données statistiques du Centre de commandement opérationnel (CCO) Covid-19 de ce 13 Août 2020, les nouveaux cas des dernières 24h sont au nombre de 125, portant à 1 580 le nombre de cas actifs actuels dont 85 présentent des formes graves. Même si le nombre de nouveaux cas est en baisse, Analamanga reste toujours l’épicentre de cette épidémie avec 49 nouveaux cas, suivi d’Alaotra Mangoro avec 9 cas, Boeny avec 8 cas, Menabe avec 9 cas, Haute Matsiatra avec 7 cas, Sava avec 7 cas, Vatovavy Fitovinany avec 9 cas; Atsimo Andrefana avec 2 cas; Diana avec 2 cas, Sofia avec 2 cas et la région d’Itasy avec 1 cas. Parallèlement, elle a également déclaré 251 cas de guérisons. 6 nouveaux décès liés au coronavirus ont été également rapportés ce jour, 4 dans la région Analamanga, 1 dans la région de HauteMatsiatra et 1 dans la régionAnosy. Le pays compte 162 décès déclarés officiellement et un cumul 11 780 cas confirmés depuis le 19 mars, date d’entrée de la maladie dans la Grande Ile.L’article Covid-19: Situation du 13.08.2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Miezaka manatsara ny tolotra omena ny mpanjifa sy ny fomba fiasa anatiny ny eo anivon’ny Paositra malagasy. Nisy ny hetsika nataon’izy ireo nandritra ny telo andro, tany Mantasoa nikarakarana izany. Manodidina ny telo amby sivifolo ny mpandray anjara tao anatin’ny telo andro ary nifarana ny sabotsy lasa teo. L’article Fifandraisan-davitra est apparu en premier sur AoRaha.
Nahoana rehefa an’ny fanjakana … ?
Nahoana rehefa sehatra tantanan’ny orinasa tsy miankina mandeha tsara, ampy fitaovana, madio … nahoana rehefa tantanan’ny fanjakana mifanohitra amin’izay ? Raha tsy hiteny afa-tsy ny toeram-pitsaboana sy ny sekoly, hita miharihary fa rehefa an’ny fanjakana tsy mandeha, tsy ampy fitaovana, maloto, fa rehefa an’ny tsy miankina, mandeha tsara, ampy fitaovana, madio, voakarakara tsara ny marary.Mety hiteny angamba ny sasany fa any amin’ny tsy miankina andoavam-bola ny rehetra sady lafo. Marina izany, fa ny an’ny fanjakana koa andoavan’ny vahoaka vola na tsy mivantana aza, amin’ny alalan’ny hetra ; eo koa matetika ny famatsiana azo avy any ivelany na fanampiana, izay mbola trosa aloan’ny vahoaka. Saingy nahoana tsy mahita sitraka amin’izany ny vahoaka ?Amin’ny ankapobeny aza, ny sampana iantefan’ny fiainam-bahoaka mivantana, toy ny fahasalamana, ny fanabeazana, ny lalana, ny angovo no kely ny tetibola atokana amin’izany, izay lanian’ny solombavambahoaka maro anisa ao amin’ny Antenimiera. M.CL’article Nahoana rehefa an’ny fanjakana … ? a été récupéré chez Newsmada.
Taolagnaro: nitondra fanazavana ny rain’ilay ankizy voadonan’ny fiara
Manoloana ilay fanelezana tsaho niparitaka amin’ny tambajotran-tserasera “facebook”, nitondra fanazavana ny rain’ilay zaza matin’ny lozam-pifamoivoizana nifandona tamina fiaram-panjakana iray tao Taolagnaro. Raha ny loharanom-baovao voaray, tamin’io fotoana nitrangan’ny loza io tany Taolagnaro, nanatrika ny atrikasa niarahana amin’ny filoha Rajoelina ny minisitry ny Fiarovam-pirenena fa tsy tao anatin’ilay fiara voalaza fa nandona ilay zaza. Nanamafy izany rahateo koa ny rain’ilay zaza fa fanakorontanana sy tsaho naely fotsiny ity niparitaka amin’ny “facebook” ity. Voadonan’ny “retroviseur”-n’ny fiara ilay zaza rehefa nandeha bisikileta izay nandeha mafy araka ny filazan’ny anabaviny niaraka aminy. Nentina nandeha hopitaly ilay zaza niharam-boina ary nijoro vavolombelona nanatrika izany ny anabaviny. Nisy ny delegasiona niaraka amin’ny zandary nanao ny fomba rehetra toy ny famonoana omby ary nanatrika ny fandevenana fa tsy araka ny filazana tsaho niparitaka any anaty “facebook”.J.CL’article Taolagnaro: nitondra fanazavana ny rain’ilay ankizy voadonan’ny fiara a été récupéré chez Newsmada.
Ao anatin’ ny fankalazana fety marobe ny eto amintsika amin’ ity volana ity, ny Alahady 20 Jona 2021 ho avy izao ohatrany fetin’ ny ray, eo ihany koa ny fetim-pirenena. Tsy diso anjara amin’ izany fankalazana ny fety samihafa izany ny Tranombarotra« Baolai ». « Ny marika « Hisense » izay mpanohana ofisialy ny« Euro 2020 » dia efa hita ato aminay, etsy Analakely,Soarano ary ao Bazar Be – Toamasina » hoy ny tompon’andraikitra. Ho an’ ny fetin’ ny ray dia maro ny zavatra azo atao fanomezana ao amin’ izy ireo. Toy ny : Smart tv sy télé led, misy manomboka 22 hatramin ‘ ny 85 » – laser tv 100 » ( misy antoka herintaona daholo), Gsm, cuisinière à gaz et électrique, synthétiseur, machine à laver, réfrigérateur, table de mixage, four micro – onde, amplificateur… « Ho fiarahana mankalaza ampifaliana ny fetin’ ny asaramanitra malagasy, dia vao naha tonga entana lohalaharana amin’ ny kalitao izahay » hoy hatrany ny tompon’ andraikitra. Ny ankoantran’ izay dia azo fantarina ao amin’ ny « site web »sy pejy fb : baolai ary ao amin’ ny 034 56 288 21 (amin’ ny ora fiasana). Dia ho fety feno fifaliana tokoa ity volana Jona2021 ity miaraka amin’ ny entana tsara kalitao hita ao amin’ ny tranombarotra « Baolai ». Cet article FETIN’ NY RAY SY ASARAMANITRA : VAO NAHATONGA ENTANA NY BAOLAI est apparu en premier sur déliremadagascar.L’article FETIN’ NY RAY SY ASARAMANITRA : VAO NAHATONGA ENTANA NY BAOLAI a été récupéré chez Délire Madagascar.
Misy miandry kendry tohina fotsiny…
Efa milamindamina ratsy ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 amin’izao? Mihena hatrany ny tranga vaovao, ny marary, ny ao anatin’ny fahasarotana, ny mamoy aina… Na izany aza, mila malina sy miaro tena hatrany. Amin’izany, mila mitandrina amin’izay mety hitranga. Nahoana? Misy tsinona ny miandry kendry tohina fotsiny amin’izay mitranga sy atao rehetra. Tsy kely lalana ny ratsy. Tsy ilaozan’izay mety mandilatra ny atao. Aleo mailo sy malina hatrany! Tsy izany ve, ohatra, ny mety ho nahatonga ny savorovoro narahina doro trano tany amin’ny oniversite any Toliara? Nilaza ny eo anivon’ny fitandroana filaminana fa misy ambadika ny raharaha: tsy mpianatra ny namoy ny ainy tao anatin’ny korontana. Andrasana ny fanadihadiana lalina. Politika izay hoe ambadika izay? Misy hatrany ny miandry kendry tohina fotsiny amin’izay mety hanaratsiana endrika ny mpitondra, hamendrofendroana sy hanakorontanana vahoaka… Tsy mifankaiza amin’izany koa, ohatra, ny zava-mitranga tany amin’ny oniversite Fianarantsoa? Fitakiana vatsim-pianarana, lasa mivadika fanakorontanana. Hafa noho izany aza ny zava-mitranga any amin’ny faritra Sofia? Ifandroritana ny hoe fandriampahalemana. Inona ny marina? Misy ny manely vaovao tsy marina, mamendrofendro, manakorontana aza. Tadiavina na tetehin’ny sasany havadika politika ny raharaha? Tsy mifankahazo ny olom-boatendry sy olom-boafidy sasany. Ohatra ihany ireo, santionany. Na inona mitranga sy atao amin’izao, misy miandry kendry tohina amin’izay azo hanakorontanana… havadika ho politika. Efa tsy hitan’ny sasany izay afitsoka amin’ny politika mahadotra? Na tsy maharitra ny fanaperan’ny fitondrana ny fe-potoam-piasany, na tsy mahazaka ny hafa manao zavatra… Izany rehetra izany, tarazo ratsy amin’ny fomba fanaovana politika? Fiheverana ny fanoherana ho fitsikerana fahatany, fankahalana, hanaratsiana, fanakorontanana… Raha tiana hiova sy hovaina izay ataon’ny hafa hoe tsy araka ny fiheveran’ny tena, tsy ny tena ve aloha no mila miova?Rafaly Nd.L’article Misy miandry kendry tohina fotsiny… a été récupéré chez Newsmada.
Fakana an-keriny tao Anjozorobe: votsotra ilay renim-pianakaviana nalaina an-keriny
Navotsotry ny dahalo, omaly maraina, ilay renim-pianakaviana 46 taona nalain’ny dahalo an-keriny ny herinandro teo, tao Betatao, Anjozorobe. Hita teny akaikin’i Soalazaina izy ary tsy misy ahina ny fahasalamany. “Mbola mitohy kosa ny fanarahan-dia ireo dahalo”, hoy ny fanazavan’ny zandary ao an-toerana. Tsy nohamarininy kosa anefa raha nisy fangatahana onitra ho famotsorana ilay renim-pianakaviana io.Tsiahivina fa nitrangana fanafihan-dahalo niharo fakana an-keriny ny tao Betatao, herinandro vitsy lasa izay. Lasan’ireo dahalo tamin’izany ny renim-pianakaviana iray teo an-toerana. Saika efa niaina am-pilaminana ny mponina ao amin’ny distrikan’Anjozorobe taorian’ireo fisamborana sesilany ireo ekipan’i Del Kely kanjo niverina tampoka ny tsy fandriampahalemana tao an-toerana. “Vokany, mihorohoro tanteraka ny mponina, indrindra moa fa any amin’ny tapany avaratra andrefan’ny distrika”, hoy ny loharanom-baovao iray. Henintsoa Hani L’article Fakana an-keriny tao Anjozorobe: votsotra ilay renim-pianakaviana nalaina an-keriny a été récupéré chez Newsmada.